लघुवित्तको सुविधाहरु - Nayapati
Home » लघुवित्तको सुविधाहरु
कार्यक्रमले प्रदान गरेको सुविधाहरु :–
बचत सदस्यहरुलाई निम्न बचत सुविधाहरुको व्यवस्था गरेको छ ।
नियमित बचत : महिलाहरुमाथोरै भएपनिनियमित बचत गर्ने बानीको विकास गर्न समूहको निर्णय अनुसार मासिक रुपमातोकेको वैठकका दिनअनिवार्य रुपमा बचत गर्ने। यस बचतमापनिबार्षिक ७% व्याजदिइने छ ।
व्यक्तिगत बचत : केन्द्रमा सदस्यहरुले आफु संग भएको रकम केन्द्रमावाकार्यालय संचालन समयमाजुनसुकै वेलामापनिव्यक्तिगत रुपमा बचत गर्न वाचाहेको अवस्थामाझिक्न सकिने छ । यस बचतमाबार्षिक ७% व्याजदिइने छ ।
योजना बचत : नियमित रुपमा १५ वर्षसम्मजम्मागर्नु पर्नेछ । यस वचतमा १५ वर्ष सम्म बचत गरेमाजम्माभएको रकमको १००% थप गरी फिर्तापाईने छ ।
सानो नानीबाबु बचत : लघुवित्त सदस्यका छोरा वा छोरीले न्यूनतम रु.१००।रुपैयामाखाताखोल्न सक्नेछन् ।यस बचतमाबार्षिक रुपमा ८ प्रतिशतव्याजदर प्रदानगरिने छ ।बालबालिका १६ वर्ष पुरा भएपछि शेयर सदस्यमा परिणत हुने ।
आरक्षण बचत : केन्द्रका सदस्यहरुले केन्द्र संरक्षणको लागि केन्द्रका सदस्यहरुको वैठक निर्णय अनुसार प्रत्येक मासिक वैठकमा कम्तिमा रु ५, रु १०, वा सो भन्दा बढि सो खातामा एकमुष्ट जम्मागरिन्छ । यस बचतमालाई ७% व्याजप्रदानगरिएको छ । यो आरक्षरण बचत केन्द्रको नाममाबनाई केन्द्रको सिफारिसमा सामुहिककार्यमा परिचालन गरीने छ ।
घुम्ति सहयोग ऋण : केन्द्रका सदस्यहरु मध्ये कमआयस्तर भएका सदस्यहरुलाई आर्थिक आयस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ०% प्रतिशतव्याज २०,०००/– (बीस हजार) सम्म केन्द्र समूहको सिफारिसमा एउटा केन्द्रका सदस्यलाई घुम्ति कोष ऋण वितरण गर्दै आइरहेको छ । यो कोष ऋण लिएवापत सदस्यले रु. २००/–रुपैया घुम्ति कोषमाजम्मागर्नु पर्दछ । यसको भाखाअवधि बढिमा १ वर्ष सम्मपाउने व्यवस्था रहेको छ ।
लघुवित्त कार्यक्रम अन्तर्गतका अन्य सेवाहरु :
सदस्य सहयोग कोष :– सदस्यहरुमा आपसी सहयोग तथा सद्भावमा वृद्धि गर्नेउद्देश्यले केन्द्रका सम्पूर्ण सदस्यहरुले प्रत्येक वर्षको पौष मसान्तमाप्रतिव्यक्ति रु. १००/– का दरले यस कोषमा रकमजम्मा गरीन्छ । यस अन्र्तगतनिम्नलिखित सुविधाहरु उपलब्ध गराईन्छ ।
सदस्यको मृत्यु भएमा रु.५,०००/– (पाँचहजार) ।
सदस्यको श्रीमान्को मृत्यु भएमा रु.५,०००/- (पाँचहजार) ।
सुत्केरी भएमा रु.१०००/– (एक हजार रुपैया) दुई पटक सम्म मात्र ।
नोट : दुर्घटना भएमा अस्पतालको प्रेस्क्रिप्सनको आधारमा बढिमा रु.३,०००/–(तीनहजार रुपैया) मात्र माथी उल्लेखित सुविधा प्राप्तगर्न सदस्यत प्राप्त गरेको कम्तीमा पनि ६ महिना पुरा भएको हुनुपर्नेछ ।
संस्थाको लघुवित्त कार्यक्रमअन्तर्गत निम्न किसिमका ऋण सुविधाहरु प्रदानभएका छन्।
१) साधारण ऋण :–
सदस्यहरुलाई विभिन्नव्यवसाय संञ्चालनको लागी केन्द्रको सिफारीश तथा घर परिवारको रोहवरमा ऋण लगानी गरिन्छ ।
पहिलो पटक – रु ३०,०००।–
दोस्रो पटक – रु ४०,०००।–
तेस्रो पटक – रु ५०,०००।–
चौथो पटक – रु १,००,०००।–
पाँचौ पटक – रु १,५०,०००।–
छैटौ पटक – रु २,००,०००।–
साँतौ पटक – रु२,५०,०००।–
२) धितो सुरक्षण ऋण :
सदस्यहरुको घर जग्गाधितो राखेर मात्र ऋण प्रवाह गरीन्छ ।
ऋणको सिमा :– अधिकतम रु.४० लाख ।
भुक्तानी तरीका : – मासिक
अवधि : – अधिकतम १० वर्ष
ब्याजदर : – संस्थाले तोकेको बमोजीम
ग्रेस समय : – अधिकतम ६ महिना
सदस्यहरुको व्यवसायको आधारमा प्रदान गरिने छ ।
केन्द्रको संस्थागत विकासको लागि प्रदान गर्दछ ।
केन्द्राध्यक्ष, केन्द्र कोषाध्यक्ष र समूहअध्यक्षहरुलाई सक्रियबनाउनअन्तरकृया गोष्ठी तालिमको आयोजनागरिन्छ ।
अन्य सुविधाहरु :
सदस्यहरुको घर दैलोमा छिटो छरितो तरिकाबाट बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने ।
सदस्यहरुलाई विनाधितो समूहको जमानीमा ऋण माग गरेको दिनमा नै ऋण प्रदान गर्ने तर अग्रिम जानकारी हुनु पर्नेछ ।
महिला सशतिmकरण एवं विकासका विभिन्न क्रियाकलापमा संलग्नता गराउने ।
१२० वटा केन्द्र निर्माण ।
३ वटा नगरपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन ।
३२५०जनाभन्दा बढी सदस्यहरु आबद्ध छन् ।
९९% असुलीदर गर्न सफलभएका छौं ।
सीप तथा व्यवसायमुलक तालिम प्राप्त गरिे ऋणबाट सदस्यहरुले विभिन्न आयआर्जनमा वृद्धि गर्न सफल ।
समूदायमा परेको प्रभाव :
समूदायमा बचत तथा लघु ऋण प्रति सकारात्मक धारणा एवं माग बढेको ।
महिलाहरुको आयआर्जन क्रियाकलापमा सक्रियता बढेको जसबाट उनिहरुको आर्थिक भार कमहुदै गएको ।
सामुदायिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाई सम्बन्धी चेतनाअभिवृद्धि भई समुदायकाअन्य सवालहरुमा पनि अग्रसरता बढेको ।
स्थानियस्तरमामहिलाहरुको सहभागिता र निर्णय लिने क्षमतामा वृद्धि भएको ।
स्थानियनिर्वाचनमाउच्चतहको नेतृत्वमाआउन सफलभएको ।
२३ औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना……..
वचत व्याज दर
आवधिक (मुद्दती) वचत 11 %
वृद्धावस्था वचत 6.5 %
तलबी वचत5%
नियमित वचत 5.5 %
नयाँपाटी विशेष वचत6%
नयाँपाटी सरल वचत 5.5 %
दैनिक वचत6%
चाडपर्व वचत 4.5 %
बाल वचत7%
ऋण व्याज दर
सदस्य धनजमानी ऋण 14.75 %
आवधिक ऋण3%
आवास ऋण 14 %
आपतकालिन ऋण %
घरायसी ऋण 14.75 %
जग्गा खरिद ऋण : 14.75 %
शैक्षिक ऋण 13 %
हायर पर्चेज ऋण 16 %
वैैदेशिक रोजगार ऋण 14.75 %
व्यवसायिक ऋण 14 %
कृषि तथा पशुपालन ऋण 10.50 %